I-DRC: Isikhathi sokuqeda ukhetho lwamongameli sesiphelile - i-RFI - TELES RELAY
Accueil » INQUBOMGOMO »I-DRC: Isikhathi sokubanjwa kwekhetho likaMengameli likhula - i-RFI
I-DRC: Isikhathi sokuqeda ukhetho lwamongameli sesiphelile - i-RFI
NguMgqibelo ophetha isikhathi sokukhalaza okhethweni lomongameli eDemocratic Republic of Congo. INkantolo Yomthethosisekelo izoba nezinsuku eziyisikhombisa ukunikeza izinqumo zayo ngaphambi kokumemezela kokugcina kwemiphumela. Umphikisi uMartin Fayulu nguye kuphela oqinisekisile ukuthi uzoya eNkantolo yoMthethosisekelo. Umhlangano wakhe weLamuka uqinisekisile ukuthi lo mdlali wathola i-61% yamavoti hhayi i-34,8% eyamenyezelwa yi-CENI.
Ngubani ozofaka izicelo futhi kanjani? Ngakolunye uhlangothi lweCach, umbuso we-victor umemezele, uFélix Tshisekedi, kusho ngokucacile ukuba angaboni isithakazelo sokusebenzisa indlela enjalo.
Wonke amaqembu athi ninezinkinga ukunikeza impendulo futhi Amaminithi yokuntuleka internet. Kuyinto esinye sezizathu isihambile umfelandawonye elibusayo, Evamile Front for Congo, i-okwamanje bafake isikhalo esivuna ikhandidethi yakhe Emmanuel Ramazani Shadary, yize-FCC wathi kwammangaza le miphumela .
Umkhulumeli walo, uBarabé Kikaya, uqinisekisa ukuthi ukuhlanganiswa kwabo kwemiphumela kuqhubeka, kodwa ukuthi abaqinisekisiwe ukuthi bayakwazi ukukhalaza ngaphakathi komkhawulo we-48h ohlinzekwe ngumthetho.
Kulaba abathathu abaqokelwe ukhetho likaMengameli, UMartin Fayulu nguye kuphela eyaqinisekisa inhloso yayo ukufaka izikhalazo. Nakuba ohlangothini Lamuka sokusebenzisana yakhe, liletha uchungechunge izingqinamba: amaminithi entshontshiwe ngonyaka ukuhlaselwa, i-PV ihlanganiswe ngisho wamemezela imiphumela angakaze eyethulwa ngabe-ceni futhi ikakhulukazi Eqinisweni ukuthi ngokuvumelana Lamuka, iNkantolo yoMthethosisekelo atholwe ngumongameli eyisibopho uJoseph Kabila.
Ehlangothini lokuphikisana ngokujwayelekile, kanye nomphakathi, kukhona ukwesaba ukuthi iNkantolo Yomthethosisekelo izokwenqabela imiphumela yokhetho likamongameli, kunokuzilungisa. Isinqumo esasizovumela uJoseph Kabila ukuba ahlale emandleni.
Alain Joseph Lomandja, owayeyilungu mission okwashiwo Cenco e 2011, esekelwe 73 76 izihloko ezihlobene nerarano sokhetho umthetho zokhetho, kukhona kunalokho ongakhetha 3 uma umahluleli ka weNkantolo yoMthethosisekelo ukholelwa ukuthi izenzo zivumelekile, ivumelana ukucabangela.
Kukhona futhi ukuthi kungenzeka ukuthi ijaji leNkantolo Yomthethosisekelo inqaba ukukhalaza uma itholakala engamukeleki kwifomu.
Lesi sihloko sivele kuqala http://www.rfi.fr/afrique/20190111-rdc-periode-recours-presidentielle-arrive-echeance
I-demokrasia encane yaseHawaii, yangaphambili yezempi, iqala ukhetho lukaMongameli waseMelika
Republic of Democratic Republic of Congo. Ushaywe ku <em> moongameli </ em>, ...